"Siza Me Tips Wokukhuthaza isidoda My Trade" (3)
Posted By: May Anokuru November 6, 2013
Izimpikiswano ngokuphathelene nezimiso zokuziphatha
I ningangabazi ukusho ukuthi imali yenza ikhampasi womuntu zokuziphatha go haywire. Isidoda abahwebi sigxile kakhulu isifiso sabo sokuba imali ngokusebenzisa kokuhlwanyela imbewu cash ukuthi enikeza ukucabangela lezinyathelo zokuziphatha yokuthambekela okunjalo kubonakala ngokucacile non-akukho. Labo abaye ukhethe ngidayisa sperms abo (nge "nature kuyohlale ubuyise 'emuva izingqondo zabo), kufanele ucabangele izinkinga ezilandelayo ukuhlinzekwa commercial kwesidoda for ngempumelelo umphefumulo ukucinga:
– Esimweni esinjalo njengoba lokhu, lapho ukunamathela 'izinto isiko' kuthiwa ngokuphawulekayo yasekela, donation ngaphezulu sperms kuyinto Taboo, ukukhuluma kancane lokunikela komuntu sperms for cash. Ukuze ugweme umbono umphakathi angadliwa, Ngiyasola isidoda Abadayisi njalo uzobheka emahlombe abo, kwesokunxele kanye kwesokudla, ngaphambi esondela emnyango yiliphi ibhangi isidoda.
– Naphezu kwesimo ngezinga eliphezulu yokucasha noma Ukuzifihla abathintekayo, kuyinto isidoda Ukuhweba hhayi esinye isici zobufebe besilisa? Ngisho nalapho zobufebe omakiwe 'mkhakha endala kunazo zonke', I am ezibuza ukuthi abaningi emhlabeni kungaba Thump bo bele obala iqhaza kulo.
Kwenzeka okufanayo usalokhu okulandelayo:
– Ngokuvumelana nalokho babengase akhiwa 'ukuthenga okungalungile' marketing, ucabangani kwakuzokwenzeka uma owesifazane ngubani kukukhipha lesibalulekile elifakwe ngokusebenzisa le ndlela kamuva bayaqaphela ukuthi umkhiqizo wawo (ingane) awukhulumi lezo zimfanelo (isib. ubuhle, nawemidlalo, intelligence, njll) ngaphambili kugqugquzelwa ebhange isidoda? Omunye akufanele ngisho siqambe, njengoba isilinganiso stop gap, ukuthi sperms ayengase ngokuyinhloko zivela kodokotela, izisebenzi zabo besilisa. Kuphi enjalo kwenzeka, ngeke liphinde lithole indawo namanje ukwamukela futhi bathande ingane kwelase?
– Akungatshazwa ukuthi sperms (ikakhulukazi 'grade A' quality) etholwe kule fomu kungenzeka bagcina eqhekeza ukwenziwa ukukhulelwa ngaphezulu kwabesifazane abahlukahlukene, Ngezinye izikhathi sisetshenziswa ezindaweni ngaphandle eyamukelayo ethile okuzala isikhungo. Lokhu kusikhumbuza ukuhluma kwezinhlobo imbewu isitshalo nenhlabathi izingadi eziningana kwezilwandle. In Nigeria, Engibaziyo benikeza ezinjalo 'Naija-man' kwenza cringe endlebeni.
– Abanye abacwaningi 'bathi' izingane ezivezwa lokhu kusho ngezinye izikhathi othola ukuthi ekuzalweni; amathuba mkhulu kwezidakamizwa, ugula ngengqondo futhi sobugebengu lapho ziba abantu abadala
Futhi, okwenza isidoda etholakalayo kuleli fomu iveza amadoda njengoba amafa nje, okungase bambalala uma akasadingi; noma zezinhlobo laboratory (isib. amagundane) futhi epulazini izinkomo ukuba milked. Kwenzeka okufanayo ingikhumbuza endalini noma izinkomo emakethe, lapho tintfo (esimweni esinjalo, amadoda) basuke profiled, abesifazane bayazikhethela abangane, futhi bamm! - A deal lishaywa. Something uyagijima ezivamile hlangana - Zisizakala lapho kudingeka, bese alahle lapho alunamsebenzi. Laba bahwebi isidoda, amehlo abo imali, Bayehluleka ukubona ukuthi inqubo isidoda iqoqo elilulaza futhi objectifies amadoda.
Kuthiwani le ndaba yokungaziphathi consanguinity (i.e. kokuba ahlobene ngegazi noma ngokusebenzisa olusuka ukhokho ofanayo)? Thina akufanele silithathe kancane leli qiniso lokuthi ukulalana kwenhlobo babengase okusakazwa ngokusebenzisa le, uma sicabangela amathuba ubuhlobo bobulili phakathi imibhangqwana bengazi imikhicito isidoda umhlinzeki efanayo (ubaba). Can abesifazane isidoda abamukeli, abanethemba lokuba isidoda umhlinzeki efanayo ngaphezu kwesikhathi esisodwa (ukuze kuzuzwe kokuba uyise efanayo begazi), njalo kuzuzwe lokhu sifiso? Ngubani uthi umhlinzeki efanayo izotholakala ngaso sonke isikhathi ukuze siqinisekise abakhulelwayo esizayo zivela emthonjeni ofanayo?
Uma sibheka ngasiphi uthola ukuba isivuno lesi yohwebo isidoda, izingane, kumelwe indiva leyo:
– Ingabe lokhu nesenzakalo ezikhulayo e isidoda ukudayiswa ibhizinisi zingaholelanga ngamabomu webutho sezingane esikhathini esizayo? Baphi izimiso umzali ezivamile kanye namagugu nomphakathi ezifana lomuntu njengoba umzali, ngubani wabo kulindeleke ukuba anikeze ezomnotho inkosikazi nezingane? Ezingqondweni isidoda abadayisi, I esihlose bekuyoba kungani uhlupho mayelana nomndeni lapho ubisi ngokudala enjalo kungazuzisa imali lula. Ingabe lokhu akufanele yini uma zingenze futhi kungonakalisa umphakathi, kuhambisana turning welithi ngubaba sibheke phansi? Kungokwemvelo ukuba abantu kufanele banakekele izingane zabo. Imiphumela elimazayo mkhuba eyaziwa kobaba abashiya imikhaya kule nomphakathi Kucacile.
– Uma amadoda amaningi abanandaba, lokho ngesigijimi esibalulekile ezinganeni? Njengoba izingane, sakhulela ne ukwazi ngalokho kufanele nibe phakathi kwendoda ubaba. Kusobala ukuthi kulaba bahlinzeki isidoda 'ayinawo hoot' mayelana lapho, lapho, noma kubani izingane zabo zizalwa?
– Kufanele singagxili amalungelo ingane? Akulona yini ingxenye kwamalungelo esintu umuntu ukwazi ngubani unina noma wakhe omzalayo noyise? In the umongo Nigerian, khuyini kobana bekuzokwenzekani nasengqondweni ukuze umkhiqizo 'zangaphandle' isidoda lungiselelo, uma umthombo ukuthi yena zaba khona sesaziwe kamuva ekuphileni?
Looking at yini "nezinye izinto ezinjalo" umelela njengengxenye ye ngabizwa ngesiteketiso of efanele yezomthetho kuleli zwe sika, the National Agency for Ukwenqatshelwa Traffic ngaBantu & Nezinye izinto ezinjalo (NAPTIP), ekuhwebeni sperms zibonisa ngokucacile emthethweni Nigeria. Kafushane, imithetho Nigerian sina wakhwinyisa at ukudayiswa noma ukushushumbisa zabantu, izitho zomzimba, futhi ibuye nasoketshezini ezibangelwa ezinjalo. (Kuzoqhutshwa).
Iba ngowokuqala ukuphawula on ""Siza Me Tips Wokukhuthaza isidoda My Trade" (3)"
Isiqophi imayelana ubuso nobuso ukuxhumana. Lutho engalingana ukukhulumisana komuntu siqu lapho ubuso nobuso contact kungenzeka. Kodwa nge yokwanda okusheshayo…
Bad News: 7 Izindlela Sugar Abhubhisa Sex Ungakwenza Kanjani Ukuphila Kube
7 Amaqiniso okumele niyazi ngaphambi kokufaka isicelo sokuba Online Isitolimende Loans